China 1,6-Hexanediol ifektri abakhiqizi | Zhongrong
1, 6-hexadiol, eyaziwa nangokuthi 1, 6-dihydroxymethane, noma i-HDO ngamafuphi, inefomula yamangqamuzana we-C6H14O2 nesisindo samangqamuzana esingu-118.17. Ekamelweni lokushisa, i-wax emhlophe iqinile, incibilika ku-ethanol, i-acetate ye-ethyl namanzi, futhi inobuthi obuphansi.
Ifomula Yamamolekhula: C6H14O2
Umsuka: I-Tangshan, u-Hebei
Isisindo Yamamolekhula: 118.17400
Ubuningi: 1.116 g / ml (20 ℃); 0.96 g / ml (50 ℃)
I-Morphology: 20 ℃ - white waxy hygroscopic solid; 50 ℃ - Okusobala okungabonakali
Izimo zokugcina: ≤30 ℃ (isitoreji esiphansi sokushisa)
Incazelo yomkhiqizo: GB / T 30305-2013 Imikhiqizo emihle kakhulu
Ikhodi Yenkambiso: 2905399090
Ukwakheka kwe-1, 6-hexadiol iqukethe amaqembu amabili we-terminal hydroxyl ayisisekelo anemisebenzi ephezulu, okwenza kube lula ukusabela ngama-organic acid, isocyanates, anhydride namanye ama-acid ukukhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo.
I-1, i-6-hexadiol iyinto ebalulekile yamakhemikhali ebalulekile, esetshenziselwa ikakhulu ukukhiqiza i-monomer esebenzayo yokupholisa ukukhanya, i-polycarbonate polyol ne-polyester imboni.Njengesicoci se-chain esetshenziswa esikhunjeni sokwenziwa nasenkanjini yokunamathisela; ama-Polyesters wezingubo zokwenziwa (ipuleti lensimbi ezinengilazi, ezinengilazi yekhoyili, ezinengilazi eziyimpuphu); Imithi yokwenziwa, izixhumanisi zamakha 1, 6- dibromohexane neminye imikhakha.
1, 6-hexanediol izofakwa emgqonyeni wensimbi wesitsha esiqinile, esomile nesihlanzekile esingu-200L. Umlomo wesikulufa wekhava yedrama uzofakwa uphawu nge-polyethylene noma iringi engenambala engenanjongo ukuvimbela ukuvuza.Noma esikhwameni eselukiweyo esingu-25L, isikhwama eselukiwe kufanele sifakwe ifilimu yezinto ze-PE, sibophe umlomo ngophawu lwentambo. uhlangabezane nezimfuneko ezingenhla.
Izinyathelo zokuphepha zokugcina
Igumbi lokugcina kufanele libe yisakhiwo esipholile, esomile, esinomoya, futhi esinobufakazi obukhanyayo.Izinto zokwakha zelashwa kahle kakhulu ngokumelene nokugqwala.Amazinga okushisa asendlini are30 ℃, umswakama ≤80% .Gcina kude nomthombo wokushisa, umthombo wamandla nomthombo womlilo. iminyango ne-Windows, amashalofu kufanele ahlanzwe njalo ukuze kugcinwe kuhlanzekile.Ukupakisha kuvalwe ngokuqinile futhi kusesimweni esihle, akunamanzi nokungcola.Kufanele kugcinwe ngokuhlukile nge-oxidant, i-ejenti yokwehlisa, i-acid chloride, i-acid anhydride, i-chloroformate, njll. Indawo yokugcina izinto ifakwe izinto zokucisha umlilo, ipayipi lomlilo, izibhamu nezinye izinto zokucisha umlilo. Indawo yokugcina kufanele ifakwe izinto ezifanele ukuvuza.
Kumele kube ukuthuthwa ngezimoto ezineziqu zokuthuthwa ngamakhemikhali; Abashayeli nabasizi kumele babe neziqu ezihambisanayo namalayisense aphelele. Izimoto zezokuthutha zizohlonyiswa ngezinhlobo ezihambisanayo nenani lemishini yokulwa nomlilo kanye nemishini yokwelashwa okuphuthumayo yokuvuza. Ukupakisha kufanele kuphelele futhi ukulayishwa kufanele kuphephe lapho kuhanjiswa.Qiniseka ukuthi iziqukathi azivuzi, awe, awe noma alimaze ngesikhathi sokuhamba.Ungaxubi ne-oxidant, i-ejenti yokwehlisa, i-acid chloride, i-anhydride, i-chloroformate.Vikelwa elangeni, emvuleni nasezingeni lokushisa eliphezulu Hlala kude nomlilo, ukushisa nendawo enamazinga okushisa aphezulu ngesikhathi sokuma.Kwenqatshelwe ukusebenzisa imishini yokusebenza kanye namathuluzi ajwayele ukubhebhetheka.Ukuhamba ngomgwaqo kufanele kulandele indlela ebekiwe, ungahlali ezindaweni zokuhlala nasezindaweni ezinabantu abaningi.
Ukuphepha: Isigaba sengozi ye-GHS: Ngokwe-GB30000 standard standard of Classification Classing and Labeling Specification, lo mkhiqizo ungowesigaba 2B ngokulimala kanzima kwamehlo / ukucasulwa kwamehlo.I-toxicity - I-Percutaneous, ekilasini
Langaphambilini I-Ethyl Acetate （≥99.7%）
Olandelayo: Ama-75% Otshwala Obulala Amagciwane ku-IBC / Drum